WAR CUSUB: Ciidamo tira badan oo MAREYKAN ah oo ku soo wajahan Soomaaliya, (Ogow Ujeedkooda)! | HalQaran.com
WAR CUSUB: Ciidamo tira badan oo MAREYKAN ah oo ku soo wajahan Soomaaliya, (Ogow Ujeedkooda)!
Oregon (Halqaran.com) – Dowladda Mareykanka ayaa qaar ka tirsan ciidamadeeda u soo dirtay Soomaaliya si ay ula dagaallamaan maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
Ciidamadan oo ay tiradoodu gaareyso ilaa 450 Askari ayaa qeyb ka noqonaya ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa ku soo hormari doona dalka Jabuuti iyada kaddibna loo soo tallaabin doono Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Mareykanka.
Ciidamada Mareykanka ee ku soo wajahan Soomaaliya ayaa waxaa ay qeyb ka yihiin guutada 186-aad ee Ciidanka lugta dalka Mareykanka, kuwaas oo tababarro siiya ciidamada Soomaaliya.
Ururka Al-Ahabaab ayaa dabayaaqadii bishii tagtay ee Sebtember weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha Balli-Doogle ee gobolka Shabeellaha hoose, halkaas oo ciidamada Mareykanka ah ay ku leeyihiin saldhiggooda ugu weyn kuna tababaraan Ciidamada Danab ee Soomaaliya.
Ciidamo Mareykan ah oo Somaliya ku so wajahan
la dagaallanka Al Shabaab